जनता समाचारमा साेमवार प्रकाशित समाचारकाे मुख्य अंशहरू :
१. सरकारले सार्वजनिक यातायातका यात्रु र चालकलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अबदेखि मास्क नलगाए सार्वजनिक यातायात चढ्न नपाइने निर्णय गरेको हो । निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मास्क नलगाएका यात्रु सार्वजनिक सवारीभित्र प्रवेश गरेमा बढीमा १० रुपैयाँ लिएर चालक तथा सहचालकले नै मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएर ८ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
३.नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले ओली सरकारले राजनीतिक र नैतिक हैसियत गुमाएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिहरुलाई बधाई तथा सम्मान दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले ओली सरकारले राजनीतिक र नैतिक हैसियत गुमाउँदा संसदको सामना गर्न नसकेकाले हठातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउनुभएको हो ।
४.भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी एक साताको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रसारित समाचार अनुसार एक साता लकडाउनको घोषणा गरिएको जानकारी मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिएका हुन् ।
५.लुम्बिनी प्रदेशका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे लगत्तै आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । दुवैजना माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
६.धरहरा चढेर काठमाडौं शहर नियाल्ने रहर पूरा गर्न नेपाली जनताले अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । अहिले ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनःनिर्माण कार्य पूरा भएसँगै रङ्ग लगाउने काम भइरहेको छ । यही वैशाख ११ गते उद्घाटन गर्ने तयरीस्वरुप अहिले रङ्ग लगाउने काम भइरहेको हो ।
७.कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो मात्रा भोलि मंगलवारदेखि शुरु हुँदैछ । यसअघि पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरुका लागि दोस्रो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत भोलि वैशाख ७ देखि ११ गते सम्म खोप लगाउन सकिनेछ ।
८.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको पाटन माध्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ । २०७२ को भूकम्प पछि क्षतिग्रस्त बनेको पाटन माध्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
९.नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२ सयभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप १,२८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
१०.कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । श्रेष्ठलाई आज (सोमवार) कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै उहाँको परिवारका पाँच व्यक्तिलाई समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटसमार्फत कलाकार श्रेष्ठले आफूलगायत परिवारका पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभएको हो ।
११.एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने डाक्टरहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न जानको निमित्त एसएलसिको मार्कसिटमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता नपुगी नाम, जन्ममिति, प्राप्ताङ्क लगायतका विवरणहरु सच्याई सोही किर्ते मार्कसिटको आधारमा बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट स्विकृती लिएका र हाल विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हाे ।
१२.काेराेना संक्रमणबाट स्टाफ नर्ससहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत दाङ तुलसीपुर निवासी २० वर्षीय स्टाफ नर्सको आज (साेमवार) बिहान ११ बजे मृत्यु भएको हाे । भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा प्रकाश थापाका अनुसार नर्सकाे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएकाे थियाे ।
१३.ब्राजिलमा एकै दिन कोरोना संक्रमणबाट एक हजार बढीको ज्यान गएकाे छ । गत २४ घण्टामा ब्राजिलमा १ हजार ६ सय ५७ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाे हो। योसँगै ब्राजिलमा अहिलेसम्ममा ज्यान जानेको संख्या ३ लाख ७३ हजार भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ । ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार गत २४ घण्टामा ब्राजिलमा ४२ हजार ९ सय ८० जना थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
१४.नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले लेखक तथा साहित्यकारलाई परिचयपत्र दिने तयारी थालेकाे छ । परिचय पत्र वितरणकाे तयारी स्वरूप आवश्यक कार्यविधि तयार भएकाे हाे । ‘लेखक–साहित्यकार परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–२०७७’ संशोधनको पहिलो मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीसमक्ष बुझाइएको छ ।
१५.सरकारले मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेश आन्दोलनका समयमा विभिन्न नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
१६.राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. कुमार चुडाल (झापा) र नहकुल सुवेदी (म्याग्दी) लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा १२९ को २ बमोजिम न्याय परिषद्का सिफारिशमा आज उहाँहरुलाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
१७.महेन्द्रनगरमा प्रधानाध्यापकलाई कोरोना पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गरिएको छ । आइतबार भृकुटी माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद भट्टलाई कोरोना देखिएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको हो ।
१८.नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ । दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो । बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएकाे छ । आज बस्ने भनिएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो । नेताहरुको व्यस्थताका कारण बैठक सरेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
१९.सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको जोखिम बढेको भन्दै शहरी क्षेत्रसहित संक्रमण बढेका जिल्लाहरुमा शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्लास्थित डिसीसीएमसीको सिफारिस बमोजिम विद्यालयहरु बन्द हुने भए पनि बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र परीक्षा भने सन्चालन हुनेछन् ।
२०.सोमबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ७ सयमा कारोबार भएको थियो भने आज प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
२१.संघीय र प्रदेश संसद्मा १३ स्थान खाली भएका छन् । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएपछि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका १३ जनाको पद रिक्त भएको हो । माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई सांसदहरुलाई कारबाही गरेपछि प्रतिनिधिसभामा चार, राष्ट्रिय सभामा एक र प्रदेशसभामा आठ जनाको सांसद पद खारेज भएको हो ।